सिन्धुपाल्चोक देखि काठमाण्डौ आएर कसरी सफल नायिका बनिन् पुजा शर्मा (७ प्रसङ्ग सहित) _ भिडियो हेर्नुस् – Khabar Patrika Np
सिन्धुपाल्चोक देखि काठमाण्डौ आएर कसरी सफल नायिका बनिन् पुजा शर्मा (७ प्रसङ्ग सहित) _ भिडियो हेर्नुस्
प्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ ०५, २०७८ समय: १०:०१:४०
सिन्धुपाल्चोक देखि काठमाण्डौ आएर कसरी सफल नायिका बनिन् पुजा शर्मा (७ प्रसङ्ग सहित)नेपाली चलचित्र जगतमा दर्शकहरु माझ लोकप्रिय नायिका हुन् पुजा शर्मा । उनी आजबाट २९ बर्ष पुगेकी छिन् । प्रेम कहानी, रामकहानी जस्ता हिट फिल्म खेलेकी पुजाको लाखौ फ्यान फलोवर्स रहेका छन् ।
१. संघर्षको कथा : सिन्धुपाल्चोकमा जन्मेकी उनको बाल्यकाल देखि नै सङ्घर्षपूर्ण भए । बुवाले छोराको चाहना राखेका र उनी छोरी भएर जन्मेका कारण पूजा र उनकी आमा दुर्गाले जीवनमा कहिल्यै परिवारबाट माया पाएनन् । श्रीमानबाट माया पाउन नसकेका कारण उनले छोरी पूजालाई भने राम्रो भविष्य दिने सोच बनाइन् । त्यसैले उनी घर परिवार छोडेर छोरीलाई लिएर काठमाडौँ आइन् ।
पूजाले जन्मेदेखि नै बुवाको माया पाउन सकिनन् । उनलाई आमा दुर्गाले नै आमा र बुबाको माया दिइन् । दुर्गाले पूजालाई कहिल्यै पनि बुवाको कमी महसुस हुन दिइनन् । आमाले पूजालाई काठमाडौँमा ल्याएर राम्रो विद्यालयमा भर्ना गरिन् । छोरीलाई राम्रो भविष्य दिन निकै सङ्घर्ष गरेर पैसा कमाइन् । उनले एसएलसी पास गरेपछि पढाइसँगै एउटा एनजिओमा पनि काम गर्न थालिन् ।
उनले आफ्नो जीवनमा एउटा मोड आएको थाहा पाइन् । उनलाई पढाई भन्दा पनि उनलाई अरू काममा रुचि लाग्थ्यो । नाच्ने र अभिनय गर्ने काम गर्न उनलाई मन पराउँथिन् । उच्च शिक्षा पढ्न क्यानडा गएकी उनी पढाइ पुरा नगर्दै फर्किइन् । उनले टुरिजम फिल्डमा लागेर पढ्न र काम गर्न थालिन् ।
६. प्रेम सम्बन्ध : निर्माता निर्देशक सुदर्शन थापा र नायिका पुजा शर्माको नाम अक्सर जोडिने गर्छ । यी दुई बिच प्रेम सम्बन्ध थियो भन्ने हरुको पनि कमि छैन नेपाली फिल्म वृत्तमा । तर उनीहरुले भने आफुहरु प्रेम सम्बन्धमा नरहेको भन्दै आएका छन् । उनीहरुको निकटता यती धेरै छ की उनीहरुको नाम जोडेर लेख्न वा बोल्न कोही हिचकिचाउँदैनन् । तर, यही निकटता बिच पनि सुदर्शन र पुजा बिचका बिमति र असमझदारी बाहिर आउने गरेका छन् । पछिल्लो समय फिल्म रामकहानीको प्रोमोसनमा ब्यस्त रहेका समयमा उनीहरु बिच फिल्म छायाङ्कन ताका देखी नै खटपट बढेको समाचारहरु बाहिरिएका थिए । सामाजिक संजाल फेसबुकमा एक अर्कालाई ब्लक गर्ने देखि पुजाको जन्मदिनमा सुदर्शनलाई केक अन्य भन्दा पछी खुवाएकोमा सुदर्शन रिसाएको सम्मका कुरा बाहिर आएका थिए ।
७. सबैले रुचाएको जोडी : नेपाली चलचित्र जगतमा एकार्काको नाम जोडिएर आउनु सामान्य कुरा हो । धेरै सेलिब्रेटीहरुको नाम एकाअर्का संग जोडिएर आउँछ । हुन त नायिका पुजा शर्माको जोडी धेरै संग मिल्छ तर फ्यानहरुले भने उनको र आकाश श्रेष्ठको जोडी निकै रुचाएका छन् । पछिल्लो समय यो जोडीबिछ निकै निकटता भएको देखिन्छ । समाजिक संजालमा शेयर भएको तस्बिर र भिडियोहरुले यस्तै जनाउछ । पुजा र आकाशको जोडीलाई दर्शकहरुले अत्याधिक रुचाएका छन । आकाश र पुजाले एकसाथ धेरै भिडियोमा काम गरेका छन् । केही समय अगाडि पुजाले भनिन्–‘हामी एक अर्कासँग काम गर्न सहज महसुस गर्छौ । दर्शकले पनि हाम्रो जोडीलाई मन पराउनुभएको छ ।’